Niandrandra ny lanitra i Jesoa ary nivavaka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
ALAHADY 24 MEY 2020
ALAHADY PAKA 7A
Asa. 6, 1-7 ; 1 Pi. 2, 4-9 ; Jn. 14, 1-12
«Niandrandra ny lanitra i Jesoa ary nivavaka»
Herinandro fahafito fankalazana ny Paka. Herinandro fandinihana ny niakaran’ny Tompo any an-danitra. Andro fahatelo amin’ny hasivian’andro fiandrasana ny fidinan’ny Fanahy Masina amin’ny andron’ny Pantekoty. Herinandro hiverenana indray amin’ny fandinihana ny hafatrafatra nataon’i Jesoa tamin’ny mpianany tamin’ny faramparan’ny fiainany tety an-tany. Tsiahivina androany àry ny vavaka nataony mialohan’ny nialany teto amin’izao tontolo izao ho any amin’ny Ray any an-danitra.
« Raiko ô, tonga ny fotoana: omeo voninahitra ny Zanakao, mba hanomezan’ny Zanaka voninahitra Anao ». Ombieny ombieny dia efa nambaran’i Jesoa fa Rainy sy Rain’ny olombelona rehetra Andriamanitra. Koa raha mivavaka Izy dia miantso an’Andriamanitra hoe ‘Ray’, ary raha nampianatra hivavaka Izy dia asainy miantso an’Andriamanitra hoe ‘Rainay’ ireo mpianany. Miandrandra ny lanitra àry i Jesoa. Miantso ny Ray Izy satria tsapany fa efa akaiky ilay fotoana hanomezan’ny Rainy voninahitra Azy. Tsy inona anefa izany voninahitra omen’ny Ray Azy izany fa ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany ho velona; ilay herim-pitiavana nasehon’Andriamanitra Ray ka namoizany ny Zanany lahitokana ho sorona ho an’ny olombelona. Izany voninahitra izany no angatahiny amin’ny Ray mba hotontosany hatramin’ny farany, na dia tsapany fa sarotra sy mafy aza.
« Ary ankehitriny kosa dia Anao, Raiko ô, ny manome voninahitra Ahy eo aminao ». Koa tsy fitadiavam-boninahitra araka ny fomban’izao tontolo izao àry no angatahin’i Jesoa fa kosa fanamafisana ny herim-pitiavana ho entiny miatrika ny fijaliany sy ny fahafatesany. Eny, tsy voninahitra, fa fahafaham-baraka aza izany hoe voaheloka ho faty, fantsihana amin’ny hazofijaliana izany, kanefa kosa maneho ny voninahitr’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy zanany izay tsy mba mivadibadika amin’ny teny nomena fa manantontosa hatramin’ny farany izay efa nolazaina sy nokasaina. Naneho ny voninahitr’Andriamanitra Ray i Jesoa hatramin’ny nahaterahany tao an-tranon’omby, ka nideran’ny anjely hoe ‘voninahitra ho an’Andriamanitra any amin’ny avo indrindra’. Fa vao mainka miharihary izany voninahitra izany tamin’ny fotoana farany niainany teto an-tany: nosamborina Izy, noesoina, nalaim-baraka sy nampangaina lainga, voaheloka ho faty fantsihana amin’ny hazo, fa nitsanganany indray sy niakarany any an-danitra izao.
« Nitory ny Anaranao tamin’ny olona nomenao Ahy ao amin’izao tontolo izao Aho ». Tsiahivin’i Jesoa ireo asa nomen’ny Ray Azy : ny manome ny fiainana mandrakizay, izany hoe ny mampahafantatra Azy Andriamanitra marina sy ny mampahafantatra Azy Jesoa Kristy nirahiny. Nanome ny fiainana mandrakizay tamin’ny fanafahany ireo rehetra voagejan’ny aretina na ara-batana na ara-panahy. Mbola fanomezana voninahitra ny Ray ihany koa izany, indrindra moa raha nino ny toriteniny ireo mpianany ka nandray ny teniny ary nino fa ny Ray tokoa no naniraka Azy.
« Anao izy ireo, ka nomenao Ahy ». Taorian’ny fitodihany amin’ny Ray dia mitodika amin’ireo antsoiny hoe ‘olona nomen’ny Ray Azy Izy’. Ny mpianany izany. Ireo no nitoriany ny anaran’ny Ray ; fanomezana avy amin’ny Ray izy ireo, araka ny voalazany hoe ‘izay rehetra omen’ny Ray ahy no hanatona ahy’ (Jn. 6, 37). Mangataka ho azy ireo àry i Jesoa. Fantany mantsy fa tsy maintsy hiala amin’izao tontolo izao Izy ho any amin’ny Ray. Ireo nomena Azy kosa dia mbola ho eto amin’izao ihany ka izany indrindra no angatahany mafy amin’ny Ray ho azy ireo. Tsy olon’izao tontolo izao izy ireo kanefa mponin’izao tontolo izao.
« Jesoa Tompo ô, raiso ary akambano amin’ny vavaka nataonao ny fivavahanay; raiso ary atambaro amin’ny voninahitrao ny fiezahanay; tohano izahay haharitra mivavaka sy mitory ny Anaranao amin’izao tontolo izao ary tsy hikatsaka mari-boninahitra hafa afa-tsy ny mahalala fa manao ny sitraky ny Ray toy ny nataonao »